Kuyaziwa ukuthi kwezimbangela eziyinhloko ukukhuluphala kukhona ukuphila umzimba kanye nokudla okungenamsoco. Futhi uma inkinga yokuqala zingaxazululwa ngokuqeqesha egumbini ukuqina ke nempikiswano ukudla iyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho. Akusiyo imfihlo ukuthi izitha main sibalo ukwenzela ukungena okuncane kakhulu kunazo zonke izinhlobo amaswidi, aqukethe omningi ushukela. Kodwa akubona bonke abantu ukulungele zisuswe kalula kusukela ekudleni evamile kophudingi zakho ozithandayo, okubi nakakhulu, ngoba abaningi - lena ukuhlukumezeka ngokwengqondo yangempela! Nokho, ukusiza ukuncipha izinyo elimnandi elafika imbiza enkulu South America - Stevia. Ukuze kwesisindo, lesi sitshalo esiwusizo ngoba has a ukunambitheka amnandi futhi isiraphu yayo akhiphe kuyinto izikhathi 400 imnandi kunezinyosi ushukela njalo. Utshani kuyafana Mint. It has amahlamvu ezithambile oluhlaza futhi ekunqandeni ukuphakama zokhahlamba kusuka 30 kuya 40 cm izinto stevioside ukunikeza lesi sitshalo ukunambitheka ethize, ngawo stevia wathola ukuthi igama lesibili -. "Imbiza Sweet". Ukwakheka kwalo unothile kakhulu amino acid kanye amafutha abalulekile, lolu hlobo luqukethe ezihlukahlukene amaminerali compounds, amavithamini kanye pectins.
Ngeshwa, isifo sikashukela, amafutha amaningi egazini, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, futhi ukukhuluphala, ziphakathi kwezinye zezinto izifo ezivame kakhulu namuhla. Esikhathini ukwelashwa kanye nokuvimbela lezi zifo kuzokusiza a stevia imbiza. Ukuze kwesisindo, isetshenziswa njengoba engathatha ushukela: isiraphu noma lozenges akhiphe yayo kungaba ukungezwa iyiphi ukudla kanye iziphuzo. Utshani has zero kilojoule, futhi akudingeki ukuba qinisekisa ukuthi ukudla kwakho okuthandayo kanye amaswidi. Ngaphezu kwalokho, esekelwe broths stevia babe izakhiwo isinqandakuvunda futhi eqeda ukuvuvukala, ngakho ngokuvamile abantu imithi esetshenziselwa ukwelapha izifo emathunjini, isilonda sisheshe siphole futhi njengendlela yokuthola induna. Kodwa abanesifo sikashukela kungaba ukusebenzisa utshani ukushukuma ezengeziwe insulin uketshezi.
Stevia kuyasiza kwesisindo iqiniso lokuthi enzyme ngezithako zawo ngesivinini umzimba, kanye nesilinganiso ezinhle izinqubo umzimba kanye ngangokunokwenzeka umthelela ekulahlekeni amakhilogremu extra. Ngokuhlanganisa ukusetshenziswa decoction yamakhambi nge umzimba nokudla non-esiqinile ngoba ngenyanga, ungalahlekelwa afika kwangu-7 kg. Kodwa iziphuzo kanye zezinkambi - hhayi kuphela kwenkululeko isitshalo ekuphekeni. Stevia isisindo ukulahleka ingasetshenziswa usawoti esikhundleni ushukela, kuyoba okwanele 5-6 amaqabunga embizeni ezintathu-litre. Futhi lapho upheka compotes kanye sezimoto isipuni ezomile amakhambi oqoshiwe uzothatha indawo ka kakhulu ushukela.
Yeka ukuthi yaphumelela kanjani Stevia isisindo ukulahleka? Amazwana isicelo ngokuvamile omuhle. Into esemqoka - khumbula ukuthi ngisho ushukela hhayi njalo kuyimbangela eyinhloko isisindo okweqile, kodwa esikhundleni imikhiqizo yayo kusukela stevia kukusiza ukwakha abalulekile ikhalori kusilela. Kuyaphawuleka ukuthi esikhundleni ushukela esekelwe utshani ziyintengo okusezingeni eliphezulu, kodwa itiye ekhethekile noma Stevia isisindo ukulahleka ngefomu omisiwe kuhle ezishibhile. Ngakho ukuthi ushibhile ukwenza siqu isiraphu lwenu olumnandi kusukela umhluzi.
Izindlela abahlukile "Medical" isisindo ukulahleka: Amathiphu iphilisi
Beautiful sibalo sentombazane e Ngokombono ongokomlando